8 Na ɛbae sɛ Samuel bɔɔ akora no, ɔde ne mma sisii Israel so+ atemmufo. 2 N’abakan din de Yoel,+ na nea ɔto so abien no din de Abia;+ wobuu atɛn wɔ Beer-Seba. 3 Ne mma amfa n’akwan so;+ wodii mfaso bɔne+ akyi, wogyee adanmude,+ na wɔdan atemmu ani.+ 4 Na Israel mpanyimfo+ nyinaa boaa wɔn ho ano baa Samuel nkyɛn wɔ Rama. 5 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Wo de, woabɔ akora, na wo mma nso amfa w’akwan so. Enti si yɛn so hene+ na ommu yɛn atɛn sɛ aman a aka no nyinaa.” 6 Na ɛyɛɛ Samuel ani so bɔne sɛ wɔkae sɛ: “Ma yɛn ɔhene na ommu yɛn atɛn” no, na Samuel bɔɔ Yehowa mpae.+ 7 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Samuel+ sɛ: “Nea ɔman no aka nyinaa, tie wɔn+ efisɛ ɛnyɛ wo na wɔapo wo; me mmom na wɔapo me sɛ minnni wɔn so hene.+ 8 Efi da a mede wɔn fi Egypt bae+ besi nnɛ, nea wɔayɛ de apo me+ akɔsom anyame foforo+ no nyinaa, saa ara na wɔde reyɛ wo yi. 9 Enti tie wɔn. Eyi nko na yɛ; bɔ wɔn kɔkɔ, na ka ɔhene a obedi wɔn so+ no kyɛfa kyerɛ wɔn.” 10 Na Samuel kaa Yehowa nsɛm no nyinaa kyerɛɛ ɔman a wɔabisa no ɔhene no. 11 Na ɔkae sɛ: “Eyi ne ɔhene a obedi mo so no kyɛfa:+ Ɔbɛfa mo mmabarima,+ na ɔde wɔn akɔ ne nteaseɛnam+ ne n’apɔnkɔsotefo+ mu, na ebinom betu mmirika adi ne nteaseɛnam anim;+ 12 ɔde wɔn bɛyɛ apem apem so ahwɛfo+ ne aduonum aduonum so ahwɛfo,+ na ebinom befuntum n’asase+ na wɔatwa ne nnɔbae,+ na wɔn na wɔbɛyeyɛ n’akode+ ne ne nteaseɛnam ho nneɛma.+ 13 Ɔde mo mmabea bɛyɛ sradehuam afrafo ne aduannoafo ne paanootofo.+ 14 Mo mfuw ne mo bobe nturo+ ne mo ngodua nturo+ mu nea eye no, ɔbɛfa na ɔde ama ne nkoa. 15 Na obegye mo mfuw mu aba ne mo bobeturo mu aba so ntotoso du du+ ama n’ahemfie mpanyimfo+ ne ne nkoa. 16 Ɔbɛfa mo nkoa ne mo mfenaa ne mo mmoa mu nea eye, ne mo mfurum de wɔn ayɛ n’adwuma.+ 17 Obegye mo nguan+ so ntotoso du du, na mobɛyɛ ne nkoa. 18 Na ɛda no, mo hene a moapaw no no nti, mubesu,+ nanso Yehowa rennye mo so saa da no.”+ 19 Nanso ɔman no antie Samuel,+ na wɔkae sɛ: “Dabi, ɔhene ara na obedi yɛn so. 20 Yɛn nso yɛbɛyɛ sɛ aman a aka no nyinaa,+ na yɛn hene bebu yɛn atɛn na wadi yɛn anim ako yɛn ko ama yɛn.” 21 Na Samuel tiee ɔman no nsɛm no nyinaa, na ɔka kyerɛɛ Yehowa.+ 22 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Tie wɔn na si ɔhene ma onni wɔn so.”+ Na Samuel ka kyerɛɛ Israel mmarima no sɛ: “Obiara nkɔ ne kurow mu.”